नियम विपरित सिफारिस: २० बर्ष चाहिन्छ नत्र कहाँ पाइन्छ ? | Citizen Post News
नियम विपरित सिफारिस: २० बर्ष चाहिन्छ नत्र कहाँ पाइन्छ ?
२०७६ भदौ १८ गते १३:४१
काठमाडौं । कम्तिमा २० बर्ष अध्यापन गराएको अनुभवलाई अनिवार्य गरेर विशेषज्ञ बन्न पाउने प्रावधान मिच्दै चिकित्सा शिक्षा आयोग उपाध्यक्ष सिफारिस समितिले तीन जनालाई ‘राष्ट्रिय चिकित्सा आयोग’ उपाध्यक्षमा सिफारिस गरेको तथ्य बाहिर आएको छ । लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनाली संयोजकत्वको समितिले डा. सुरेन्द्र शेरचन, शम्भु पहारी र श्रीकृष्ण गिरीलाई विज्ञका रूपमा राख्न सिफारिस गरेको थियो । जुन ऐन नियम र अनुभवका आधारमा मेल खाँदैन ।
काउन्सिलमा दर्ता भई बीस वर्ष विशेषज्ञ चिकित्सक वा प्राध्यापकको रुपमा काम गरेको व्यक्तिलाई काउन्सिलले विषय विज्ञको मान्यता दिने गरेको छ । सिफारिसमा परेका तीन जनाले नै शिक्षण संस्थामा अध्यापन गराएको वा स्वास्थ्य क्षेत्रमा बीस वर्ष काम गरेको अवधि पुगेको छैन । मेडिकल काउन्सिलमा शेरचनको स्नातकोत्तर दर्ता सन् २०१५ मा भएको छ । पहारीको सन् २००८ र गिरीको २००३ मा दर्ता भएको छ । शेरचनले चार वर्षमात्रै अध्यापन गराएको अनुभव छ । पहारी सन् २००८ देखि अध्यापनमा संलग्न भई २०१५ मा अवकाश पाएका थिए । उनको चिकित्सा शिक्षामा सात वर्षको अनुभव छ ।
गिरीको अध्यापनमा ६-७ वर्षमात्रै समय देखिन्छ । वीर अस्पतालको रेक्टर हुँदा २०६९ सालदेखि उनी अध्यापनमा थिए । रेक्टरबाट चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरेपछि उनी चिकित्सा शिक्षामा छैनन् । उनी लामो समय स्वास्थ्य मन्त्रालयको चिकित्सा महाशाखामा कार्यरत थिए । अहिले उनी अर्थोपेडिक उपचारमा वीरमै संलग्न छन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएर बीस वा दस वर्ष काम गरेको नदेखिए पनि मैनाली संयोजकत्वको समितिले कसरी सिफारिस ग¥यो ? आश्चर्यको कुरो छ । देशी वा विदेशी जहाँको डिग्री लिए पनि मेडिकल काउन्सिलको विधान र ऐनविपरितका सिफारिसमा कहाँ विज्ञ हुन पाइन्छ ? भन्ने प्रश्न उठेको हो ।
सिफारिसमा परेकामध्ये शेरचनको शैक्षिक योग्यता आधुनिक चिकित्सामा स्नातकोत्तर छैन । उनले नर्वेबाट स्नातक हासिल गरेका थिए । शेरचनले हासिल गरेको स्नातकलाई आधुनिक चिकित्सा शिक्षामा स्नातकोत्तर मान्न नमिल्ने काउन्सिलले बतायो । काउन्सिलमा आवद्ध नभई अस्पतालमा काम गर्ने अनुमति त हुँदैन, झन् विज्ञ कसरी मानिदिने ? नेपाल मेडिकल काउन्सिल नियमावली २०२४ को दोस्रो संशोधन २०५५ अनुसार ‘काउन्सिलमा स्थायी दर्ता भएको व्यक्तिले काउन्सिलले तोकिएबमोजिमको योग्यता हासिल गरेमा मात्र त्यस्तो व्यक्तिको नाम विशेषज्ञको रुपमा दर्ता गरिने’ उल्लेख छ । यहि संशोधनको आधारलाई टेक्दा २० बर्ष काम गरेको अनुभव हुनैपर्छ ।
सिफारिस समितिमा मैनालीसँगै प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव शिशिर ढुंगाना र शिक्षण अस्पतालकी डा. दिव्या सिंह थिए । समितिमा सत्ताको प्रभाव देखिएको हुन सक्ने स्पष्ट आधार छ । मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष धर्मकान्त बाँस्कोटाले सिफारिस गरिएका व्यक्तिको विज्ञताबारे समितिले बुझ्नुपर्ने बताए । ‘जसले सिफारिस गरे उनैले यसबारे थाहा पाउनुपर्ने हो, मेडिकल काउन्सिलमा सोधेको थाहा भएन,’ बाँस्कोटाले भने । आयोग उपाध्यक्षका लागि ११ जनाले आवेदन दिएका थिए । तीमध्ये दुई जनाको नाम रद्द भएको थियो । बाँकी ९ मध्येबाट तीन जनाको नाम सिफारिस गरिएको थियो ।
सिफारिस गरिएकामध्ये एक जनाको नाम मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरेपछि पहिलो पटक ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग’को उपाध्यक्ष नियुक्ति हुनेछन् । उपाध्यक्षका लागि मागिएको आवेदनमा राजेन्द्रप्रसाद साह, रमेशचन्द्र सिंह, यहुनचन्द्र शिवाकोटी, तरुण पौडेल, निलमणि उपाध्याय र पारसकुमार पोखरेलले आवेदन दिएका थिए । उनी नेकपानिकट मानिन्छन् । उनी विराटनगरका हुन् । आयोग बनेपछि ७५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निस्शुल्क पढाउनुपर्ने प्रावधानलाई छल्न मेडिकल कलेजहरू सक्रिय छन् ।
केही मेडिकल कलेज सञ्चालकको प्रभावमा उनलाई छानिएको स्रोत बताउँछ । दोस्रो नम्बरमा सिफारिस भएका पहारीले लामो समय वीर अस्पतालमा काम गरेका छन् । अवकाश भएपछि उनी लुम्बिनी र युनिभर्सल मेडिकल कलेजमा पढाउँथे । उनी पदका लागि जुनसुकै पार्टीसँग पनि ‘लबिङ’ गर्नसक्ने क्षमता राख्छन् । उनी प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विश्वासिला मानिन्छन् । सत्तारूढ दलका नेताहरू अझै पनि न्याम्समा गाभिएको मनमोहन कलेजलाई ब्युँताएर सम्बन्धनका लागि लागिपरेका छन्। त्यसमा सहजीकरण हुने विश्वाससाथ उनको नाम सिफारिस गरिएको बताइन्छ । गिरी हाडजोर्नी विशेषज्ञ हुन् ।
उनी अहिले वीरको ट्रमा सेन्टरमा काम गरिरहेका छन् । उनी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका पूर्वरेक्टर हुन् । उनी शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलनिकट मानिन्छन् । पोखरेल जनमोर्चामा रहँदैदेखि गिरी निकट थिए । त्यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले डा. विजय न्यौपानेको नाम सिफारिस गर्न खोज्दै विशेषज्ञताको वर्ष खोज्दै मेडिकल काउन्सिलमा बुझेको थियो । काउन्सिलले डा. न्यौपानेको एमडी दर्ता १३ वर्षमात्र रहेको जानकारी पठाएपछि उनको नियुक्ति नै रोकिएको थियो । पन्ध्र वर्षको विशेषज्ञता नपुगेपछि न्यौपानेले नियुक्ति पाएनन् । सिफारिसमा परेका डा. गिरी भने दस वर्ष काम गरेको भए उपाध्यक्ष बन्ने योग्यता पुग्ने दाबी गर्छन् ।